प्रेमी र पूर्व प्रेमीसँग दिपिकाले गरिन् पार्टी
अहिले दिपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको सम्बन्ध मिडीयाका लागि सजिलो समाचारको स्रोत बनिरहेको छ । बिगत केहि दिनदेखि उनीहरुको विवाह र ईन्गेजमेन्टको खबरले मिडीया तताएको छ । तर ..
कालो हरिण मुद्दाबाट सलमान मुक्त , बहिनी अलवीरा देखिईन् निकै खुसी
कालो हरिण सिकारको मामिलामा बिगत आठ बर्षदेखि सलमान खान विरुद्ध दुई फरक -फरक मुद्दा चलिरहेका थिए । तर सोमबार सलमानलाई अदालतको फैसला आए संगै राहत मिलेको छ । उनलाई राजस्थान..
३६ बर्ष भईन् सलमानकी गर्लफ्रेड लुलीया, सलमानले अर्गनाईज गरे ग्रयाण्ड पार्टी
बलिउड अभिनेता सलमान खानकी कथित गर्लफ्रेण्ड लुलीया वन्तुर आज आफ्नो ३६ औँ जन्मदिन मनाउँदैछिन् । भारतको एक अनलाईन पोर्टलमा छापिएको समाचारका अनुसार, लुलीयाको जन्मदिनमा सलमा..
विहेको प्रश्न सुन्न सक्दैनन् रणवीर ,दिपिकासँग विवाह कहिले ? भन्दा रिसाए
अभिनेता रणवीर सिंहलाई विवाहको प्रश्नले यतिबेला दिक्क बनाएको छ । जहाँ गएपनि उनलाई विवाहकै प्रश्न सोधिएका कारण उनी दिक्क भएका छन् । हालै फिल्म मदारीको स्क्रिनिङमा पुगेका ..
निर्माताले भने भारतका एकमात्र सुपरस्टार रजनीकान्त –कबालीको पहिले दिनको कमाई २५० करोड
सुपरस्टार रजनीकान्तको फिल्म कबालीले पहिलो दिन २५० करोड कमाएको प्रोड्युसरले दाबी गरेका छन् । कबाली अहिलेसम्मकै फस्ट डे हाईएस्ट ओपनर बनेको छ । यो बर्ष सलमान खानको फिल्म स..
साउथका यी १० अभिनेताको विवाह को सँग ? हेर्नुहोस् तस्वीरमा
अभिनेता रजनीकान्तको चर्चा हाल फिल्म कबालीका कारण निकै भईरहेको छ । २२ जुलाईमा रिलिज भएको कबालीलाई दर्शकले खुबै रुचाएका छन् । फिल्मको पर्दामा कहिले रोमान्टिक कहिले त सेन्..
गर्भवति करिनालाई आमीरले दिए यस्तो टिप्स
अहिले बलिउडको हटकेक बनेकी छिन् अभिनेत्री करिना कपूर । करिना गर्भवती भएको थाहा भएदेखि मिडीयामा करिनाकै मात्र चर्चा चलिरहेको छ । अहिले गर्भवति करिना आमीर खानका कारण फेरि चर्चामा आएकी छिन् । आमीरले करिनालाई गर्भावस्थामा कस्तो खाना खाने भनेर सुझाव दिएपछि उनको चर्चा झनै बढेको हो । करिना पाँच दिनदेखि बान्द्रा स्थित फिल्म स्टुडियोमा एक..
शाहरुखकी हिरोईनमाथि लाग्यो प्रतिबन्ध, भारत कश्मीर विवाद पछि पाकिस्तानी कलाकारहरु भए बेरोजगार
अहिले पाकिस्तानबाट बलिउडमा आएका केहि कलाकारहरु कामको खोजीमा भौतारिरहेका छन् । गएको दुई बर्षयता बलिउडमा उनीहरुले काम नपाएको खबर सार्वजनिक भएको छ । भारत र पाकिस्तान बीचको विवाद पछि यस्तो अवस्था आएको हो । पाकिस्तानले कश्मीरलाई स्वतन्त्र राज्य हुनु पर्ने माग राखेको थियो । तर भारतले कश्मीर हाम्रो हो भनेका कारण यी दुइ देशबीच विवाद [&h..
कबालीको लगानी ११० करोड तर रिलिज पूर्व नै कमायो २०० करोड
दक्षिण भारतका सुपर स्टार रजनीकान्तको फिल्म कबाली शुक्रबार रिलिज भएको छ । फिल्मको पहिलो शो बिहान ४ बजे थियो । कबाली संसारभर गरी ४००० स्क्रीन्समा रिलिज भएको छ । पी रञ्जितको निर्देशनमा बनेको यो फिल्म ११० करोडमा बनेको हो । ट्रेड एनालिस्टले फिल्मले वल्र्डवाईड एक दिनमै २०० करोड कमाउने अनुमान लगाएका छन् । फिल्ममा रजनीकान्तको […]
दिपिकाले भनिन् –म गर्भवति छैन
अभिनेत्री दिपिका पादुकोणले बुधबार राती एक फेशन शोमा भाग लिईन् । उनी त्यहाँ डिजाईनर मनिष मल्होत्राको डिजाईन ड्रेसमा शो स्टपर बनेकी थिईन् । दिपिका सँगै अभिनेता फवाद खानले पनि र्याम्प वाक गरे । शोमा दिपिकाले लगाएको ड्रेस बेहुलीको जस्तो थियो । फेशन शोमा दिपिकालाई देखेपछि पत्रकारहरुले उनको विवाहको बारेमा प्रश्न गरे । केहि समय अघि [&h..
सबैभन्दा महंगा रजनी , दक्षिण भारतका १२ अभिनेता कस्को पारिश्रमिक कती ?
दक्षिण भारतका सुपरस्टार रजनीकान्तको बुहप्रतिक्षित फिल्म ‘कबाली’ २२ जुलाईमा रिलिज हुँदैछ । रिलिज हुनु अघि नै चर्चा बटुलेको यस फिल्मले राम्रो व्यापार गर्नेमा निर्माता निर्देशक आशावादी छन् । रजनीकान्त साउथ ईन्डीयन फिल्मका सुपर स्टार हुन् भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ । तर उनी साउथ ईन्डीयन फिल्मका सबैभन्दा महंगा अभिनेता हुन..
सुल्तान सफल तर बिग्रीयो सलमान र अनुष्काको सम्बन्ध
फिल्म सुल्तानमा पति पत्नी बनेका बलिउड अभिनेता सलमान खान र अभिनेत्री अनुष्का शर्माको सम्बन्ध बिग्रिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । फिल्ममा काम गरेर सलमान र अनुष्काले निकै प्रशंसा बटुले । उनीहरुको जोडीलाई दर्शकले खुब रुचाए । फिल्मले पनि ५०० करोड भारु भन्दा धेरैको ब्यापार गरेको छ । फिल्मले सफलता पाएपनि सलमान र अनुष्काको सम्बन्ध भने [&he..
एयरपोर्टमा अर्जुनले हाले पत्नीलाई अंगालो, सम्बन्ध ठिक भएको संकेत
अर्जुन रामपाल र ऋतिक रोशनकी पूर्व पत्नी सुजैन खानको अफेयरको चर्चाले बलिउड निकै ततायो । सुजैन र ऋतिकको सम्बन्ध बिग्रनु र उनीहरुको डिभोर्सको कारण पनि सुजैन र अर्जुनको सम्बन्धलाई मानिएको थियो । यति मात्रै नभएर यहि मार्च महिनामा अर्जुनले पत्नी जेसियासँग डिभोर्स लिन लागेको खबर पनि सार्वजनिक भएको थियो । तर, यी सबै कुरालाई गलत [&helli..
मेकअप गर्ने क्रममा बलिउड अभिनेत्रीहरु
हामीले हेर्दा बलिउड सेलिब्रेटीहरुको लुक निकै परफेक्ट देख्छौँ । फिल्म, स्टेज शो, वा अन्य फंशनमा उनीहरुको हेयर स्टाईल, मेकअप ड्रेसअप सबै मिलेका हुन्छ । उनीहरुलाई राम्री देखाउन स्टाईलिस्ट्ले काम गर्छन् । उनीहरुलाई कसरी राम्रो देखाउने भन्ने चिन्ता उनीहरुका मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाईलिस्टलाई हुन्छ । परफेक्ट लुक्सका लागि उनीहरुले लामो..
सुपर हिरो बने टाईगर – अ फ्लाईङ जटमा यस्ता देखिए
फिल्म ‘अ फ्लाईङ जट’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । अभिनेता टाईगर श्रफ फिल्म अ फ्लाइङ जटमा सुपर हिरोको रोलमा छन् । त्यस्तै अमेरीकन अभिनेता नाथन जोन्सको अभिनय पनि फिल्ममा छ । टाईगरले यस फिल्ममा अभिनेत्री ज्याकलिनसँग रोमान्स गरेका छन् । रेमो डिसुजाको निर्देशनमा बनेको यो फिल्म २५ अगस्टमा रिलिज हुने छ । फिल्मको ट्रेलर हेर्न ..